Imtixaanka Promark3 ... kaliya sawiro - Geofumed
Juunyo, 2010 GPS / Qalabka
Waxa uu maray koorsadii Waan la hadlay iyaga, waxaan samaynay imtixaano u dhexeeya Magellan GPS Promark3, Mobile Mapper 6. Arrinta xiisaha leh, qaabka sahanka, shabakad ayaa la sameyn karaa, iyadoo kaddibna lagu shaqeynayo kumbuyuutar keliya. Xaaladahaas waxaad ka dhigi kartaa saxnaanta Saacadaha Saacadaha 2 ee mudada gaaban, iyada oo MobileMapper oo kaliya lagu shaqeynayo kaliya hal koox ayaa qaadan doonta waqti dheeri ah si loo qabsado submetrics.
Goobta la doortay waxay ahayd magaalo qurxoon, oo leh qulqulo aan caadi ahayn, oo ah dhulalkaas. Kadib markii aan helnay meel aan raad ku lahaaneyno qaylada cadaaladda, waxaan bilaabney habka.
Waxaan ilaaway in ay lagama maarmaan noqoto in qadada, wiilasha, qulqulka, xitaa haddii cimiladu ay ahayd waali, maalintii ugu horreysay ee duufaanta Agatha ee ka abuurtay masiibooyin dalal dhowr ah oo ka mid ah Bartamaha Ameerika. By habka, waxaan kugula talinaynaa inaad aragto dhaawaca soo-dhaweeyaha ee fuliyay by Segeplan ... si fiican, intee in le'eg waxay leeyihiin heer sare saaxiibadood tan iyo markii ugu dambeysay Waan baaray.
Ka hor inta aan bilaabin inaan ka hadlo natiijooyinka farsamada, waxaan ka tagayaa sawirro ah waxa warbixinta farsamo ayan sheegin.
Meeqo intee ayay iiga i siin doonaan duulimaadka on eBay ...
... Waxaan ku dhaartay in mid ka mid ah qalabkan ay isticmaalaan madaxda si aan u ilaalino annaga naloo dooneyno inaanan tagin haweenka gabdhaha ...
Ilaahay iiga caawi, sidee waxan ... Waxaan xusuustay ...
ay! Waxaan mar horeba ilowday ...
Iyo in ay yar tahay sitcomcom compa ...
- ... oo waxaad u maleyneysaa inaad adigu naga siiso arintan?
- mmm ... waxaa laga yaabaa inay na siiyaan qadada
- Laakiin horeba waa saddex galabtii!
U fiirso sida fiican!
Qof kastaa wuxuu isku dayi doonaa Ipod waxaanan naga tagi doonaa inaan daryeelo salkaan.
... iyo qabowgu wuxuu sameynayaa.
... jooji, waxaad u baahan tahay inaad aragtid buurta sida ay tahay.
Wow, kabadani waa wax yar. Yaa garanaya haddii ay ka shaqeeyso ka fiican suunka lo'da.
Post Previous«Previous Horumarinta Codsiyada VBA ee Microstation
Post Next Microstation: qaabeynta daabacaaddaNext »
2 jawaabta "Baaritaanka Promark3 ... kaliya sawirrada"
Ma awoodi kartid; 6 Mobile Mobile ma taageeri karo ka-dib-u-dhejinta, macnaheedu waa inuusan qabsan karin xogta sida rover iyo in markaa ka dib ay noqon karto dib-loo-shaqeyn ku salaysan qalab kale oo ku salaysan.
Laga soo bilaabo qadka moobiilka ee "Mobile Mapper", waxay kaliya taageeraan dib-u-dhigga: Mobile Mapper Pro, Mobile Mapper CX, Mobile Mapper 100 iyo ProMark.
Isc Marco Grajales isagu wuxuu leeyahay:
Galab wanaagsan, waxaan jeclaan lahaa in aan ogaado haddii aad iga caawin kartid shaki. Fiiri, waxaan heystaa gawaarida Promtarka 3 GPS iyo khariidadda moobiilka xNUMX waxaanan jeclaan lahaa in aan ogaado haddii ay jirto hab lagu isticmaalo saldhig ahaan (balanqaad) iyo rerjiga gadaal. Haddii aad awoodo, waxaad iigu sheegi kartaa sida qaabka loo sameeyo